သိုးကြီး တကောင် လို – Hlataw.com
ကျနော်ကနယ်ကနေပြောင်းလာတဲ့ ဆရာဝန်တယောက်ပါ တနေ့သီရိဆိုတဲ့ကောင်မလေး လှေကားပေါ်ကချော်ကျပီးကျနော်တာဝန်ကျတဲ့ဆေးရုံကိုလာတတ်ပါရော ဆရာဝန်ကြီးဒေကလဲကျနော်ကိုဘဲ ကြည့်ခိုင်းတော့တယ် အဲဒါနဲ့ကိုကျနော်ကုပေးရတာပေါ့ ကောင်မလေး က ဖတဆိုးလေး ဗျ သူ့အဖေကငယ်ငယ်ကတည်းကဆုံးသွားတာ လုံးကြီးပေါက်လှလေးဗျ့ရင်သားလေးကလဲတောင့်တောင့်တင်း ခါးလေးကလဲသိမ်သိမိလေး အိုးလေးကကျစ်ကျစ်လှစ်လစ်လေး အဲ့သူကို အခြေနေသွားကျိပေးတော့ သူနဲ့ကျနော်နဲ့၂ယောက်ထဲကျန်တဲ့လူမေကလဲဒီနားဆေးသွားဝယ်တဲ့ချိန် ကျနော်ကလဲ ထုံးစံအတိုင်း သူ့ နို့တွေတင်လုံးတွေခိုးကြည့်နေရင် လီးကတောင်နေတာပေါ့
ဖစ်ချင်တော့မနက်ကကျိထားတဲ့ဇာတ်ကားအရှိန်ကလဲမပြေသေး သူကလဲမမြင်မြင်အောင်ပြနေသလိုဘဲ ရင်ဘက်လေး ဆွဲဆွဲတင်လိုက် အင်ကျီကလဲ အကျယ်ဆိုတော့ ရင်သားလေးဒေကိုဖွေးလေး မြင်နေရတာပေါ့၊ ကျနော်လို ဆရာဝန်မျိုးကို သူစိတ်ဝင်စားနေဟန်ပေါ်ပါတယ်။အထှာ ပေးသလိုလိုလေး မခို့တရို့လေး လုပ်နေတယ်။ ကျနော် လဲ ထွက်နေတဲ့ကျနော့်လီးကိုလဲထိန်းရင်းပေါ့ ကောင်မလေးကဘယ်လိုမြင်သွားလဲမသိဘူး အဲကျမှကျနော်လဲ အောက်ငုံကျိမိတယ် ညိတော်မောင်ကတော်တော်ထနေပိကိုး ကောင်မလေးကရှက်သလိုလိုမျက်နျာလွဲသွားတယ် ပိးတော့မာ့ ခနပြန်လှည့်ကျိပိး “ဆရာ့ လီးကအကြီးကြီးဘဲနော်”တဲ့ ဖောင်းနေတာဘဲတဲ့ ကျနော်လဲအနားဖြေးဖြေးချက်းကပ်ပြီး သူ့ရဲ့နခမ်းလေးကိုစနမ်းတော့တာပေါ့ကောင်မလေးကလဲ အလိုက်သင့်လေးပြန်နမ်းတယ် အထူးခန်းထဲမာဘယ်သူမျမရျိဘူး ကျနော်နဲ့သူနဲ့နယောက်ထဲရှိတယ် တွေးကျိဘယ်လောက် စိတ်ဒေထလိုက်မလဲဆိုတာ နမ်းနေတုန်းကောင်မလေးက ကျနော့်ဘောင်းဘီဇစ်လေးဖြုတ်ပီးလွီးကိုဂွင်းတိုက်ပေးနေတယ်
ကျနော်လဲသူ့အင်္ကျီကိုချွှတ်ပြီးသူ့နို့လေးတွေကိုနှယ်ပေးနေလိုက်တယ် ကျနော်သူ့ ထမီစကိုအသာလေးဖြည်ချပြီး သူအဖုတ်လေးကိုအသာလေးပွတ်ပေးနေမိပါတယ် သူ့ရဲ့နို့လေးတွေကိုစို့ပေးနေရင်းနဲ့ပေါ့ သူတဖြည်းဖြည်းဖီးလ် တက်လာတယ် ထင်ပါတယ်သူ့ပေါင်လေးကတဖြည်းဖြည်းကားလာပြီး မျက်လုံးလေးမှိတ်ကာ ညည်းနေလေရဲ့ သူအဖုတ်လေးထဲကိုကျနော် လက်လေးထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လုပ်ပေးနေမိတယ် ။ “အား… ဆရာ မရတော့ဘူး သီရိကိုလိုးပေးပါတော့ဆရာရယ်” “ပေါင်လေးကားထားပေးနော် ပေါ်လှဲလိုက်”သူ့ကိုကူတင်ပေါ်မာ ပေါင်လေးကားခိုင်းထားပိး ကျနော်သူ့အဖုတ်ကို လျှာထိုးမွှေ ပေးလိုက်တယ် ခနနေတော့အရည်တွေစီးကျလာပါနယ် ကျနော်ပါးစပ်ထဲရောက်လာတာနဲ့ကျနော် မြှိုချလိုက်ပါတယ် သူကကျနော်ကြည့်ပြီး “သီရိငရဲတွေကြီးကုန်ပါ့မယ်ဆရာရယ်တဲ့” ကျနော်လဲသူ့ကိုပြုံးပြလိုက်ပြီး သူ့အဖုတ်လေးကို ပြန်ပြီးလျက်နေပေးလိုက်တယ် သူက လှဲနေရကထလိုက်ပြီး ကျနော်လီးကို စုပ်ပေးဖို့ လီးကိုကိုင်ထားပါတယ် “အားပါးပါး… ကောင်းလိုက်တာ သိရိရယ်”ဆိုပီးညိးလိုက် သူစုပ်ပေးနေတာကို တဖြည်းဖြည်း ဖီးလ် ယူနေရင်း ပြီးချင်သလိုလို ဖြစ်လာပါတယ်
“ဆရာ သီရိကိုလုပ်ပေးပါတေါ့” လို့သူ့ပါးစပ်လေးကပြောလာယ် “အင်း “လို့ပြောပိး “သမီးခုနကအတိုင်းလေးဘဲ လှဲလိုက် စောက်ပတ်လေးကိုဖြဲထားပီး ကျိတော့ နီနီရဲရဲလေးလုပ်ချင်စရာလေးဗျာ” ကျနော်လဲ လီးတန်ကိုကိုင် ဒစ်ဖျားလေးကိုသွင်းလိုက်ပါတယ် ပြီးနောက်အနဲငယ်သွင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်” အရင်းထိ ထက်သွင်းလိုက်တာ သူ့ဆီမှ “အား”ခနဲ ညည်းသံလေးထွက်လာပါတယ်။ “သီရိအရမ်းနာသွားလို့လား” “အင်း နဲနဲပါ”ဆို အံတင်းခံတယ် “ဖြည်းဖြည်းလေး လုပ်ပေးမယ်နော်” အထဲမှာတော်တော် လေးကျပ်နေတယ် အပျိုလေးမို့လို့ထင်ပါရဲ့ သူ့ကိုမေးကြည့်တော့ “သီရိအရင်က ဒီလိုလုပ်ဖူးလား” “အင်း.. ရည်းစားနဲ့ပါ လီးကလဲတိုတော့ ၁၀ချက်လောက်လုပ်ပြီး ပြီးသွားတာ ဖီးလ် တောင်မယူလိုက်ရဘူး” “ဆရာ သူထက်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်နော်” ကျနော်ခုနကထက်အရှိန်ကိုနဲနဲမြန်လိုက်ပါတယ်
ပွှတ်ပွှတ်ဖုတ်ဖုတ်ဖုတ် ဘွတ်ဘွတ် “အားအား.. အား…” အသံတွေကတော့စုံနေတာပါဘဲ အောက်ကလဲအရှိန်မပျက်လိုးရင် နို့လေးတွေကို တဖက်ချင်းစို့ပေးနေလိုက်ပါတယ် ကျနော် လိုးနေရင်းခဏရပ်လိုက်ပြီး သူ့ကို လေးဘက်ထောက်လေးကုန်းခိုင်းလိုက်ပါတယ် နောက်ကနေကြည့်လိုက်တော့ အားပါးပါး လှလိုက်တဲ့စောက်ဖုတ်လေးဗျာ။ သူ့ဖင်ပေါက်လေးကိုလိုးမကြံမိပါသေးတယ် အချိန်ကြာသွားလို့သူ့အမေပြန်လာလို့ မိသွားမှဖြင့်ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေဦးမယ် စောက်ဖုတ်လေး ကိုဘဲအချက်နှစ်ဆယ်သုံးဆယ်လောက် မြန်မြန်လေးလိုးပေးလိုက်ပါတယ် သူရောကျနော်ရောပြိုင်တူပြီးသွားပါတယ် ကြမ်းပြင်ပေါ်ကျသွားတဲ့အရည်တွေကိုတစ်ရှူးနဲ့သုပ်ပြီး ပုံမပျက်ပြန်နေလိုက်ပာတယ်ကြာလာတောသူ့အမေပြန်ရောက်လာပါတယ် အဲ့နေကစပြီး သူ့ဆေးရုံမဆင်းခင်ချိန်ထိ နေ့တိုင်းခိုးလိုးဖြစ်ကြတယ် နောက်တော့တည်းခိုခန်းခေါ်ပီဲးလိုးဖစ်သေးတယ်…
သီရိစိတ်တွေထနေပီ…… အခါတိုင်းတော့စက်ပတ်ယားရင်ဆရာလိုးပေးနေကခုဆေးရုံကဆင်းကထဲက သီရိဆရာနဲ့လိုးတာဒေပြန်မှန်းရင်း လက်နဲ့ကလိလိုက်ရ ဒုတ်နဲ့ကလိနေရနဲ့ အရမ်းကိုလိုးတာခံချက်နေပီ “ကလင်…ကလင်” ”ဟလို” ”သီရိလား” အင်းဆရာရယ်အရမ်းသတိရနေတာ” ”ဆာနေပီလား” ”အင်းအရမ်းကိုလိုချင်နေပီ ချစ်ချင်ပီ” ”အာ့ဆို … အဲဒီကိုလာခဲ့လိုက် ညနေ 6နာရီကိုရုံးဆင်းတာနဲ့တန်းလာခဲ့မယ်စောင့်နေနော်” ”အင်းစောင့်နေမယ်နော် ဆရာ ” ”ဘိုင် သီရိ” ။ ကျမလေ ဆရာနဲ့ လုပ်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ အရမ်းဆာနေပီ… အောက်ကညီမလေးကို စမ်းကျိတော့ အရမ်းခံချင်နေတာနဲ့ အိပ်ယာပေါ်မာ ကွကိုလက်နဲ့လုပ်နေရတယ် ဒါမဲ့အရမ်းထည့်ချင်လာတာနဲ့ မီးဖိုချောင်မာပစ္စည်းသွားရှာရတော့တာဘဲ ခရမ်းသီးကြီးမြင်လိုက်တာနဲ့ကျမမခံစားနိုင်တော့ဘူး အခန်းထဲအမြန်ယူသွားပီး ကျမစပထဲကို ပွတ်ပေးနေမိတယ် အရည်ဒေကလဲစိမ့်ထွက်လာပီ ခရမ်းသီးကိုအပေါက်ဝကိုနဲနဲချင်းဆီထည့်မိတယ်
”အားး…လီးအစစ်လိုနွေးမနေပေမဲ့ စပတခုလုံးကျက်သိမ်းထသွားပါရော အားး … အားး … ဆရာရယ်မြန်မြန်လုပ်ပါဆိုပီးဘကျမ တချီပီးသွားတော့ ကျမလဲတရေးအိပ်ပျော်သွားတယ် ညနေဟိုတယ်ရောက်တော့ မကြာပါဘူးဆရာလဲရောက်လာတယ် အခန်းဝမာတွေ့တွေ့ချင်း ကျမနူတ်ခမ်းဒေကိုအငမ်းမရနမ်းတော့တာဘဲ ကျမလဲဆာနေပီဆိုတော့ဆရာဘောင်းဘီထဲလက်နိုက်ပီး ဆရာလီးကြီးကိုရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ပေးနေတယ် ”သီရိရယ် လွမ်းလိုက်တာကွာ ကျမလဲဆရာကိုအလွမ်းနေတာ”ကျမဒူးထောက်ပီးဆရာလီးကို ပျာ်ပျယ်နယ်နယ်စုပ်ပေးတယ် ”အားး …ကောင်းလိုက်ထှာ…သီရိရယ်”ဆိုပီးဆရာဆီကအသံလေးဒေကကျမကိုပိုပီး စုပ်ပေးချင်မိနေတယ် ”သီရိ ကိုတို့လုပ်ရအောင်နော်”ဆရာပြောတာနဲ့ကျမလဲကုတင်ပေါ်တတ်ပီး ပေါင်လေးကားပေးထားလိုက်တယ်။ ဒစ်ကြီးကလဲကော့ယြပျံနေပီ အကျေားကြီးကလဲတင်းကာနေတာပဲ ကျမစောက်ပက်ထဲလဲအရည်ကြည်တွေထွက်နေပါပီ.
ဆရာလျှာနဲ့ယှက်ပေးကွိာုပေါင်ကာပေးလိုက်တယ် . ရွတ်……ရှီးး……..အရမ်းကောင်းတာဘဲဆရာရယ် အားး……… အားး ……… ဆရာသီရိကိုလုပ်ပါတော့နော် ကျမစောက်ပက်ဝရောက်နေပါတော့တယ်. ကျမလဲဖြဲပေးရင်း. လီးကြီးဝင်လာမှာကိုမျှော်နေပါတယ်. ဖျစ်…..ဖျစ်……. အားးးးး..အားးးး ဆရာက နွားသိုးကြီးတကောင်လို အသကုန်စောင့်ထိုးချလိုက်တော့. ကျမအရမ်းနာသွားတယ် အားးးးအားးးးး ဖြေးဖြေး. လိုးပေးပါ ကျ မအရမ်းနာတယ် အဲဒီကျမှ. ဆရာကလျှော့ပီ လိုးပေးပါတယ် ပက်…..ဘွတ်…..ဘွတ်…….အား အားးးး ကျမအရမ်းကောင်းလာပါပီ… ဆရာပက်လက်လှန်လိုက်ကွာ. သီရိမရတော့ဘူး ……… အားးးးးးအားးးးးးးး ကောင်းလိုက်တာ. ဘက်……..ဘွတ်……..ဘွတ်…….. ဖျစ်……….ဖျစ်……..အမလေး …..စောင့်….စောင့်………သီရိပီးတော့မယ် ..စောင့်..စောင့်……အားးးးးးးးအး.းးးးးးးးးးလုပ်…..လုပ်…….သီရိပီတော့မယ်. အားးးးးးးးးကောင်းလိုက်တာ ဆရ်ာရယ်. အမလေးးးးးကျမ. အချက်၅၀ လောက် စောင့်လိုးပီ. ကျမအကောင်းဆုံးသို့ရောက်ပီ. စောက်ပက်ထဲအရည်တွေပန်ထွက်ပီ. ကျမပီသွားပါတော့တယ်……။